Doorasho Xalaal Ah Oo Ka Dhacday Magaalada Kismayu
Waxaa maalinimaddii Talaadada ee ay taariikhdu ahayd 26ka November, 2013 ka dhacday magaaladda Kismayu ee caasimadda Gobolka Jubadda Hoose Doorashadii Xiriirka Kubadda Cagta ee gobolka oo lagu qabtay Hotel Qiil-mawaaye eek u yaal xeebta quruxda badan ee Calanley.
Waxaa soo xaadiray dadweyne aad u tiro badan oo xiiseynayey natiijadda ka soo baxda doorashadda maadaama lagu yaqaanay bahda Sports ka Kismayu isqabqabsi tiro badan iyo waliba looma dhameyn si sahlan looga soo minguuriyey kuwa loo yaqaano siyaasiyiinta amase sirloowyaasha.
Waxaa sidoo kale soo xaadiray wufuud Sports oo ka timid caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho sida Ku-xigeenka Xiriirka Kubadda Cagta Soomaaliya Hassan Farey, Xoghayaha Olympic ka Somaliyeed (GOS) Duraan Farax, iyo waliba madaxa horumarinta Sports ka ee Gobolka Banaadir Daa’uud Shire.
Waxaa xafladda doorashadda lagu furay ayaadaha Quraanka oo uu akhriyey Sh Jamaal ka dibna waxaa daadahayntii munaasabadda la wareegay Eng. Abdisamed Sheik-Qasim oo ahaa Guddoomiyihii Guddiga Qabanqaabadda Doorashada iyo waliba Guddoomiyaha Qurba-joogta Sports ka Gobolka Jubadda Hoose isagoo ku soo dhaweeyey masraxa Madaxweyne Ku-xigeenka maamul goboleedka Jubaland jaalle Cabdulahi Shiikh Ismacil (Fartaag) oo aad ugu dheeraaday muhimadda uu u leeyahay Sports ka isdhexgalka bulshadda isla markaasna uu gobolkani ahaa mid aad loogu qadariyo Kubadda Cagta loona baahan yahay in dib loo soo celiyo lana gaarsiiyo J/Dhexe iyo Gedo oo ka mid ah maamulka Jubaland. Madaxweyne Ku-Xigeenka wuxuu cadeeyey in cidii loo doorto jagadda Guddoomiyaha Xiriirka Kubadda Cagta uu taageero buuxda ka helayo maamulka Jubaland.
Waxaa sidoo kale xaadir ku ahaa xafladda Guddoomiyaha Degmada Kismayu jaallle Khaldaan, iyo siyaasiyiin kale oo aad looga yaqaano deegaanka sida Yaasiin Radar, Gen. Cabdi Mahdi, Gen. Darwiish iyo kuwo kale oo badan.
Guddiga qabanqaabadu waxay hadiyad sharaf ah macawis iyo cimaamad guddoonsiiyeen madaalaha Sports ka G/J/Hoose waa macalin Sanjo waxaana guddoonsiiyey Ku-Xigeenka Xoghayaha Xiriirka Kubadda Cagta Soomaaliyeed Jaalle Xasan Farey. Macalin Sanjo wuxuu ku kaftamay, “ Masaajidka miyaa la ii diray” isagoo ula jeeday “ Naso”.
Waxaa goobta lagu soo dhoweeyey Xoghayihii hore ee Xiriirka Kubadda Cagta G/J/Hoose Ahmed Taqal (Timo-Jilic) si uu warbixin kooban ugaga bixiyo waxqabadkii Xiriirka dabadeedna waxaa halkaas lagu soo dhoweeyey musharaxa kaliya ee buuxiyey shuruudaha laga rabay, Burhan, halkaas oo uu ka soo jeediyey taariikhdiisa oo kooban iyo waxa uu damacsan yahay inuu ka qabto kubadda cagta gobolka.
Waxaa loo guda galay doorashaddi Guddoomiyaha waxaana waraaqihii doorashadda u qaybiyey wakiiladda Sports ka 5 ta degmo ee kala ah Kismayu, Afmadow, Jamame, Badhadhe, iyo Xagar Guddoomiye Ku-Xigeenka Guddiga Doorashadda jaalle Shakiib Dhowre. Haddaba waxay 4 degmo soo doorteen Burhan Kukuyo halka hal codna uu xumaaday.
Guddoomiyaha Qabanqaabadda shirka, Eng. Abdisamed, ayaa si buuxda ugu dhawaaqay natiijaddii doorashadda isagoo markhaati ka dhiganaya dadweyne kor u dhaafay laba boqol (200) oo isugu jiray rag iyo dumar in Burhan Kukuyo uu yahay Guddoomiyaha Xiriirka Kubadda Cagta G/J/Hoose muddo hal sano ah isla markaasna uu muddo sitimaan ah ku soo dhamaystiro maamulkiisa, waxaa la cadeeyeye in cidii ka hortimaada natiijadan loo aqoonsan doono kuwo ka soo horjeeda ammaanka iyo waliba horumarka sports ka gobolka iyo Soomaaliyaba.
Waxaa sidoo kale taageero iyo gubaabo halkaas ka soo jeediyey Ku-Xigeenka Xoghayaha SFF jaalle Xasan Farey oo halkaas ka qiray inay doorashadani tahay sax, sharcigana ay waafaqsan tahay loona baahan yahay in goboladda kalena ay ku daydaan.
Xoghayaha Olympic ka Soomaaliyeed Jaalle Duraan ayaa sidoo kale hambalyo iyo dardaaranba isugu daray Guddoomiyaha cusub isla markaasna si qoto dheer ugu sharxay dadweynihii tiradda badnaa GOS iyo sida ay u wada shaqeyn karaan G/J/Hoose iyo waliba Zone 4 oo ka kooban 3 da gobol ee Jubaland. Xoghayaha iyo madaxa horumarinta Gobolka Banaadir jaalle Daa’uud Shire ayaa Guddoomiyaha cusub ku wareejiyey qalab cusub oo isugu jiray kubaddo, shinguards, buufin, seeri, hal koox qalabkeed, iyo shaararka tababarayaasha.
Waxaa goobta iyaguna guubaabo qiimo badan ka soo jeediyey gabdhaha Sports ka oo ay hogaaminayeen Muxubo Cartan iyo Duniyo Gaabay. Waxaa halkaas ka hadlay Suldaan Diili Mahaadi waxaana shirkii si qurux badan u soo gabagabeeyey Guddoomiye ku-Xigeenkii Guddiga qabanqaabadda shirka jaalle Shakiib Dhowre.
Waxaa loo guda galay in dabaal degii iyo baashaalka Xalwo Kismayu amase Xalwo Baazeti. Tani waal guul usoo hoyatay guud ahaan Kubadda Cagta Soomaaliya oo runtii u dhutinaysa ciyaartooydii heer qaran ee uu gobolka J/Hoose u soo saari jiray sidii warshad lagana sugayo maamulka cusub inay masuuliyadoodii qaran dib u hantaan Allana la garab galo.
Waxaan sinaba lagu hilmaameyn talooyinkii iyo waaya-aragnimaddii laacibkii weynaa ee Abdalla Shino oo ah nin u qalma hogaanka qaybaha kala duwan ee Sports ka sidoo kale waxaa xusid mudan qurba-joogta Sports ka Gobolka Jubadda Hoose sida Abdi Xaq, Mohamud Yare, Khalif Riko, Tufaah Sayid, Mohamed Muse Jabroos, iyo Cumari Faruur oo aad isleedahay magaaladda Kismayu ayeey qayb ka deganaayeen, Dr. Abdisamed Abicar Haji ayaa talo iyo tusaale la garabtaagnaa Guddiga Doorashadda har iyo habeenba.